Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo Cafis u fidiyey Maxaabiis ku jirtay Xabsiyada Puntland | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo Cafis u fidiyey Maxaabiis ku jirtay Xabsiyada Puntland
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 15-7-2015 digreeto uu soo saaray sumadeeduna tahay Ref-MW/DPS/517/2015 cafis u fidiyey fadliga bisha barakaysan ee Ramadaan awgeed 127-maxbuus oo ku kala xiran xabsiyada Puntland.
Wareegtadaan oo soo baxday saaka ayaa waxaa si rasmi ah loogu gudbiyey Xeer ilaaliyaha guud ee Dawladda Puntland Garyaqaan Maxamuud Xassan Aw-cismaan , iyadoo lafaray in berri subax la sii daayo dhammaan maxaabiistaasi oo ku kala xukuman dambiyo kala duwan .
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa uu maxaabiistaas uu siidaayey ugu talagalay sidookale in ay farxadda ciida la wadaagaan eheladooda, maadama ay tahay maalin ay wada faraxsan yihiin dhammaan umadda muslmiinta ah.
Dhanka kale madaxweynaha ayaa u rajeeyey 127-kaa maxbuus ee uu cafiska u fidiyey mustaqbal wanaagsan iyo in ay qeyb ka noqdaan bulshada wanaageeda iyo waxtarkeeda , kana waantoobaan dambiyada lagu soo xiray.
Maxaabiistaan ayaa mudadii ay xabsiyada Puntland kujireen helay wabarasho dhinac walba ah , waxaana ku sugan xabsiyada Puntland dad u tababaran dhaqancelinta maxaabiista lagu xiro xabsiyada kala duwan ee Puntland.